May | 2013 | Colourful Recipes
You can shape your rose’s how ever you want.
Make egg yolk and the2teaspoon milk and brush the crocodile.
Let rise inawarm palace. Bake at 350ºF – 18 minutes, or until rose is golden brown and firm to the touch.
traingle shape ( for leaf )
Preheat oven – 375ºF – 18 minutes ~ 20 minutes
ဂျုံ တ၀က်ကို ဂျုံ အချောင်း ရှည် ရှည် လက် ၂ ဖက်ဖြင့် လိမ့် လိမ့်ပေးပီး နောက် …
ဒလိမ့်တုံးမှာ ဂျုံမှုန့် အနည်းငယ်သုပ်ပြီး ဂျုံကို ပြားသထက် ပြားအောင် ဆွဲ .. ဆွဲပြီး ဂျုံကို လိမ့်သွားပါ။
သစ်ရွက် အတွက် တြိဂံပုံစံ ဖြတ်ပြီး
နှင်းဆီပန်းအတွက်ဆိုရင် ဂျုံပြားကို ၂ ထပ် ထပ်လိုက်ပြီး လိပ်ပါ။
ပြီးလျှင် တစ်လက်မ သာသာလောက် ဓါးဖြင့် ဖြတ်ပါ။
ဂျုံပြား ၂ ထပ် လိပ်ထားလျှင် နှင်းဆီပွင့်ဖတ် ပိုများတာမို့ နှင်းဆီ ပေါင်မုန့် ပိုလှပါသည်။
အိမ်မှာ အခု မုန့်ဖုတ်ထားတာက ဂျုံပြား တစ်ချပ်တည်းကို လိပ်လိုက်ပြီး ဓါးဖြင့် ဖြတ် ..
နှင်းဆီပုံစံကို အလယ်မှာ ထားပါ။
ဘေးပတ်ပတ်လည်လည်မှာ တြိဂံပုံစံ – သစ်ရွက်များ ၀ိုင်းရံပေးထားပါ။
ပြီးလျှင် အ၀တ်ဖြင့် ၁ နာရီလောက် အုပ်ထားပြီးမှ
ပေါင်မုန့်ပေါ်မှာ ကြက်ဥနှင့် နို့ ရောစပ်ပြီး စုပ်တံဖြင့် သုပ်ပေးပါ။
ကြိုတင်ပူနေအောင် ဖွင့်ထားသော preheat oven မှာ 350ºF – 18 min ~ 20 min ထိ ပေါင်မုန့် ဖုတ်ပါ။
By Thet Nandar • Posted in Bread	• Tagged Bread, egg yolk, food